उद’ण्ड युवराज दीपेन्द्र ! राति राति गर्थे यस्ताे काम !! – ताजा समाचार
उद’ण्ड युवराज दीपेन्द्र ! राति राति गर्थे यस्ताे काम !!
काठमाडौं । रातको समयमा बाँसझांगमा रहेका कागको शि’कार गर्न रुचाउँथे युवराज दीपेन्द्र । दरबारको दक्षिण र पूर्वतर्फको बाँसझाँगमा टन्नै कागको गुँड हुन्थ्यो । उनी बास बसेका कागमाथि गोली चलाउँथे । एकपटक यही विषयको समा चार लेखेपछि जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले यही खुलासा सहितको समाचार लेखे ।
उनलाई दरबारब बोलाएर हप्काइएको थियो । तर, पछि छाड्न वाध्य भए । दीपेन्द्र बाहिर हेर्दा सालिन देखिएपनि भित्र भित्र उदण्ड नै थिए । तर, बहुमुखी प्रतिभाका धनी थिए । उनले प्रारम्भिक शिक्षा बुढानिलकण्ठ स्कुलबाट प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि उनले इटन कलेज बेलायतबाट पनि शिक्षा ग्रहण गरे ।
निन्छ, इटन कलेज पढ्दा ताका उनलाई अनुुशासनको कारबाही भएको थियो । किनकि उनले त्यहाँ मादकपदार्थ विक्री गरेका थिए । इटन कलेजपछि उनले नेपालकै त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा पनि अध्ययन गरे ।भगोलमा स्नातकोत्तर तहमा गोल मेडलिष्ट बनेका थिए । उनलाई भूगोलमा विशेष दख्खल राख्ने धोको थियो । रिपोटर्स नेपालबाट